Miiska ugu fiican ee loox lagu tuuro mashiinka mashiinka wax lagu xiro iyo Warshad | Hadal
Miis gear rullaluistemadka runout ridaya mashiinka lagu hagaajiyay
Mashiinka miiska isdabajoogga ah ee mashiinka gawaarida loogu talagalay waxaa loo qaabeeyey loona soo saaray si loogu beddelo DEMAG gearbox-ka hoos u dhaca. Waxaan dib u habeyn ku sameyneynaa qalabkan nolosha nolosha 100,000 ee saacadood marka loo eego shuruudaha waxqabadka ee hawlgalka Miiska Run-Out ee M4. Waa 30% karti marsho sareysa iyo nolol qaadasho ka badan matoorka jihaysan ee jira. Si loo xaqiijiyo nolosha dheer, shaabadda galka iyo soo saarida shaabbada shaati waa inuu mid kastaa ka koobnaadaa saliid firidhsan iyo sharooto dibi fiiqan oo saliid leh, kuna socda Tungsten Carbid la safeeyey ...
Mashiinka miiska isdabajoogga ah ee mashiinka gawaarida loogu talagalay waxaa loo qaabeeyey loona soo saaray si loogu beddelo DEMAG gearbox-ka hoos u dhaca.
Waxaan dib u habeyn ku sameyneynaa qalabkan nolosha nolosha 100,000 ee saacadood marka loo eego shuruudaha waxqabadka ee hawlgalka Miiska Run-Out ee M4. Waa 30% karti marsho sareysa iyo nolol qaadasho ka badan matoorka jihaysan ee jira.
Si loo xaqiijiyo nolosha dheer, shaabadda galka iyo soo saarida shaabbada shaati waa inuu mid walba ka koobnaadaa saliid firidhsan iyo sharooto bushib leh sharooto dufan leh, oo ku ordaya shaadh Tungsten Carbide ah oo dhalaalaya, oo leh labyrinth lab ah oo ka baxsan shaabadda, Ku habboon 1/4 ”Dakadaha dufan ee BSP waa in lagu daraa shaabad kasta, si fudud ayaa looga heli karaa Gearbox-ka la rakibay, markii lagu xidhayo saliidaha otomaatiga ah ee PERMA.
Dhamaan qalabka waxaa lagu sameeyaa aalado kaarboon hooseeya oo leh cabitaan, daminta adkaanta HRC58-62, iyo dhulka si sax ah DIN6.
Qaadashada oo leh nashqad gaar ah oo lagu sabayn karo bilowga sare, dib u celinta xaddiga naxdinta leh ee wakhtiga gaaban.
Dhimista sanduuqa 'gearbox', gearbox kasta oo aan bixinno wuxuu raacayaa dukumiintiyada oggolaanshaha macaamiisha kahor soosaarka:
a) Sawirada hordhaca ah (2D / 3D) ee gear.
b) L10 Nolol u ahaanshaha goob kasta oo la xushay.
c) Lnmh Nolol u ahaanshaha goob kasta oo la xushay (la doorbido).
x) Xogta gear iyo qiimeynta qalab kasta.
e) Qorshaha Kormeerka iyo Imtixaanka (ITP).
Si guud marka loo eego ISO12944 iyo ISO 9223, sanduuqa Gearbox waa in loo ilaaliyaa sida soo socota,
• Dusha sare (marka laga reebo dusha mashiinada) si loo hormariyo loona daboolo
rinji-ku-saleysan epoxy illaa DFT ugu yaraan 300 µm.
• Meelaha mashiinka dibedda lagu farsameeyo si loogu daboolo ka hortagga miridhku ku habboon.
• Meelaha kiiska marsho ee gudaha iyo tuubbada ayaa si ku filan loogu ilaaliyaa rinjiga ka hortagga saliidda.
• Qalabka fiilada ee saliidda birlabta;
• Neefsashada Gearbox.
Gearbox-ka inuu noqdo mid ka-hortagga brin-ka oo si habboon looga ilaaliyo waxyeellada inta lagu jiro gaadiidka.
Ku soo rid gearbox waxaan dammaanad ka qaadeynaa 3 sano.
Aad ayey ugufiican tahay biraha birta lagu rido rullaluisteeda runout rollers '.
BAUER BG04 BG05 BG06 BG10 BG15 BG20 BG30 BG50 BG60 BG60 BG70 BG80 BG90 BG90 BG100
Hore: Dhimista yareynta qalabka maareynta buugaagta ee taagan
Xiga: wadaha xamuulka qaada
F taxane warshad helical barbar usheeda dhexe moun ...